सरकारबाट निकालेर अलपत्र पार्ने दाउ « Pahilo News
सरकारबाट निकालेर अलपत्र पार्ने दाउ
प्रकाशित मिति : 8 July, 2016 6:42 pm
२४ असार । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउने खेलमा पछिल्लो चरणमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुबीच बाक्लै कुराकानी भए पनि कांग्रेसले माओवादीलाई विश्वास चाहिँ गरेको छैन ।
स्रोतका अनुसार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपटक धोका खाइसकेका कारण अहिलेसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वास गरेका छैनन् । सभापति निर्वाचित हुनासाथ सत्ताको दाउपेचमा लागेका देउवाले पहिलो गासमै ढुंगा भेटेपछि दाहाललाई मुखभरिको जवाफ फर्काउन पछि परेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार, अस्ट्रेलिया जाने तय भएको अघिल्लो दिन अर्थात् असार ७ गते बेलुकी दाहाल देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । त्यहाँ दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका लागि नयाँ सरकार चाहिने कुरा उठाएका थिए । तर, दाहालले ‘राष्ट्रिय सहमति’ शब्द उच्चारण गर्नासाथ देउवा झोक्किएका थिए । ‘तपाईं त तेस्रो पार्टी हो नि ! के को राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ ?’, देउवाको भनाइ थियो, ‘मेरो ओलीजीसँग नै कुरा भएको छ ।’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘तपाईंले युद्धकालमा पनि मलाई धोका दिनुभयो, अस्ति पनि धोका दिनुभयो ।’
माओवादीले आफूहरूलाई देखाएर एमालेसँग बार्गेनिङ गर्दै नौ बुँदे सहमति गरेको बुझाइ कांग्रेसमा छ । विगतमा पनि दाहालले एकका विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गर्दै आएको भन्दै उनलाई पूरै विश्वास गर्न नहुने पक्षमा नेताहरु देखिएका छन् । यतिसम्मकि, कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत दाहालको विश्वास गर्न हुँदैन भनेर देउवालाई सुझाव दिइरहेका छन् ।
उसो त दाहाल अरुलाई प्रयोग गर्ने कलामा माहिर मानिन्छन् । यो पनि माओवादीको प्रयोगको नीति हो भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । ‘सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने हो भने पनि माओवादीसँग किन मिल्ने ? हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छौं, हामी आफैं पहल गर्छौं, माओवादीसँग किन लहसिएर जाने भन्ने कोणबाट छलफल सुरु भएको छ’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
परिस्थिति अनुकूल नभए पनि माओवादी र त्यसको नेतृत्वलाई सत्ताको छटपटीले व्यग्र बनाएको छ । स्रोतका अनुसार, यसबीचमा दाहाल २१ जुनमा गएर ५ जुलाईमा फर्किने गरी चीन जाने कार्यक्रम थियो । तर, नेपालको सत्ता राजनीतिमा खासै रुचि नदेखाउने चीनको रुझान बुझेका कारण उनको भ्रमण हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
रमाइलो कुरा त के छ भने हिजो माओवादीमा बाबुराम भट्टराई भारतका प्रिय थिए । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माहरूले नै भट्टराईलाई ‘भारतीय एजेन्ट’ भन्थे । तर, अहिले तिनै महरा, पुन र शर्मा भारतको नजिक भएका छन् ।
चीन अहिले सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको संकेत पाएपछि दाहालले आफैंले पहल गरेर तय गरेको भ्रमण पनि अन्तिममा आफैंले रद्द गराएका थिए । चीनका राष्ट्रपति सि जिङ पिङ आगामी अक्टोबरमा नेपाल आउने र कम्तीमा त्यतिञ्जेल यही सरकार रहोस् भन्ने चाहना बुझेपछि दाहालले भ्रमण रद्द गराएको स्रोतले बतायो ।
दाहालको उपदेयता सकिँदै
रमाइलो कुरा त के छ भने हिजो माओवादीमा बाबुराम भट्टराई भारतका प्रिय थिए । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माहरूले नै भट्टराईलाई ‘भारतीय एजेन्ट’ भन्थे । तर, अहिले तिनै महरा, पुन र शर्मा भारतको नजिक भएका छन् । पार्टीभित्र महरा र पुनको कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध थिएन । यस बीचमा महरालाई रोकेर आफू महासचिव बन्न पुन हात धोएर लागे । महराविरुद्ध समाचार लेखाउँदै समेत हिँडे । तर, अहिले उनीहरूको गठजोड भएको छ । ‘भारत साथमा छ’ भनेर पुन, शर्मा र महराले प्रचण्डलाई मनाइरहेको बताइन्छ ।
प्रचण्डले पनि ओली सरकार र भारतबीच बढ्दो दूरीको मूल्यांकन गर्दै उनीहरूको कुरा विश्वास गरेका छन् । ‘उनलाई यो सरकार ढालियो भने भारतको साथ–सहयोग पाइन्छ भन्ने भ्रम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर ‘र’ले यिनीहरूलाई यसरी घुमाइरहेको छ कि दाहाल सरकार ढाल्न मात्र प्रयोग हँदै छन् । त्यसपछि उनको उपदेयता सकिँदैछ ।’